Talyaaniga - Wararka Safarka | Wararka Safarka (Bogga 2)
Maxaa lagu arkaa Sardinia
Mid ka mid ah meelaha ugu sareeya ee loo tago Talyaaniga waa Sardinia, oo ah jasiirad soo jiidasho leh oo ku taal Badda Dhexe, taas oo sanadka ...
Magaalada Vatican waa mid ka mid ah microstates-yada yar ee hadda ka jira Yurub waxayna ku taal Rome, ...
Dalxiis Harada Garda
Harooyinka ayaa ah meelaha fasaxa loo doorto xilliga qaboobaha iyo xagaaga, iyo mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan ...
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan ee Michelangelo iyo mid ka mid ah khasnadaha ugu waaweyn ee Vatican, kaniisada Sistine Chapel ...
Maxaa lagu arkaa magaalada Talyaaniga ee Syracuse
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo lagu arki karo laguna sameyn karo magaalada Talyaaniga ee ku taal jasiiradda Sicily, Syracuse, oo ah meel taariikh badan leh.
Maxaa lagu arkaa Polignano a Mare
Soo ogow waxa aan ku arki karno magaalada Polignano a Mare, ee gobolka Talyaaniga ee Puglia, oo leh xeebteeda cajiibka ah.
Maxaa lagu arkaa Genoa
Waxaan ku tusineynaa wax kasta oo aad ku arki karto booqashada magaalada Talyaaniga ee Genoa, magaalo leh deked iyo magaalo qurxoon oo duug ah.
Catacombs-ka Saint Callisto
In laga fikiro Rome si looga fikiro sarta ilbaxnimada reer galbeedka, toddobadeeda buurood, qaab dhismeedkeeda cajiibka ah, ...
Tani waa St. Peter's Basilica iyo qubbadkeeda
Waxay ku taal bartamaha Rome, Vatican-ka waa xarunta dhexe ee Kaniisada Katooliga iyo gobolka ugu yar ...
Matxafyada Capitoline ee Rome
Matxafyada Vatican-ka, Matxafyada Magaalada Rome waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu muhiimsan caasimada ...
Sirta iyo faahfaahinta Safka Trajan
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Safka 'Trajan's Column', oo ku yaal Rome, kaas oo bixiya bas-reliefs oo ka sheekaynaya dagaalladii Trajan.
Aadamuhu had iyo jeer wuxuu jecel yahay inuu wax kor u dhiso dunidana waxaa ka buuxa dhismooyin isku dayaya inay cirka xoqaan ama gaadhaan daruuraha. Gudaha Haddii aad safar ugu baxdo Talyaaniga, ha moogaanin Taawarka Pisa. Sñi, munaaraddii foorarsiga ahayd ee caanka ahayd. Waxay aad ugu dhowdahay Florence.
Gastronomy ee Italia
Cudurka 'gastronomy' ee Talyaanigu wuxuu leeyahay suxuun adduunka oo dhan aad ugu caansanaa oo caan ku ah iyo kuwo kale oo sidaa u macaan.
Dharka caadiga ah ee Talyaaniga
Waxaa jira xulasho ballaaran oo ah dharka caadiga ah ee Talyaaniga, oo leh qaybo ka mid ah Renaissance, dhiirrigelinta Roomaanka, iyo dharka Venetian.
Magaalada Talyaaniga ee Verona maahan oo kaliya meeshii Romeo iyo Juliet ay ahayd inay ku noolaadaan, laakiin waxay bixisaa xulasho weyn oo taallooyin iyo kiniisado ah oo la booqdo
Booqo burburka Herculaneum
Ma waxaad aadeysaa Talyaaniga Ma jeceshahay burburka? Ma booqan doontaa Pompeii? Marka ha uga tagin burburka Herculaneum. Waxay yihiin kuwo heer sare ah oo aad isugu dhow!
Meelaha muhiimka ah ee lagu booqdo Talyaaniga
Soo ogow meelaha muhiimka ah ee ay tahay in lagu booqdo Talyaaniga. Magaalooyin waaweyn oo ay tahay inaan ku liis gareysanno safarkayaga safarka ah.
Nalalka taraafikada ayaa xakameyn doona marinka loo maro St. Mark's Square laga bilaabo 2018
Barxadda St. Mark waa, hubaal, astaanta taariikhiga ah ee Venice. Sannad kasta qiyaastii 40 milyan oo qof ...
Tropea, dahabka Talyaaniga
Actualidad Viajes waxaan jecel nahay inaan ku barano meelo cusub oo qurux badan, sida tan Tropea, dahabka Talyaaniga ee aad ubaahantahay inaad booqato markaad aqriso tan.
16 Booqashooyinka Muhiimka ah ee Sardinia II
Waxaan ku tusineynaa sideedii booqasho ee ugu dambeysay ee lagama maarmaanka aheyd inaad ku sameyso jasiiradda quruxda badan ee Sardinia, laga bilaabo magaalooyinka yaryar ilaa dhigaalka.
16 Booqashooyinka Muhiimka ah ee Sardinia I
Soo ogow booqashooyinka muhiimka ah ee jasiiradda Sardinia, oo ah meel ay ka buuxaan xeebo, magaalooyin qurux badan iyo magaalooyin taariikhi ah.
The 6 sestieri ee Venice ee ay tahay inaad ka ogaato safarkaaga
Wax badan ayaa laga qoray Venice, magaalada kanaallada. Nooc ka mid ah matxafka hawada u furan ee ...
Venice ayaa xaddidi doonta marinka Barxadda St.
Fagaarahan Venetian waxaa lagu yaqaanaa luuqadiisa asalka ah sida Piazza San Marco ...
Booqo magaalada Bologna ee Talyaaniga, waxa la arko
Soo ogow waxa aad ku arki karto Bologna booqashada magaalada oo mar ay ka buuxi jirtay munaarado welina caan ku ah arcaddeeda.
7 ka mid ah xeebaha ugu fiican koonfurta Talyaaniga
Marka cimiladu wanaagsan tahay waxaan horay u dooneynaa inaan aadno xeebta, sida kuwa aaggeenna horayba loo yaqaanay, waxaan ...
Safarka Taormina, Sicily, waxa la arko iyo wax la sameeyo
Taormina waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan dhammaan Sicily, oo leh jidad qadiimi ah iyo aragtiyo qurux badan oo ku saabsan badda iyo Etna.
Booqashooyinka lagu sameeyo agagaarka Rome
Soo ogow shan booqasho oo ku dhow Rome oo aad sameyn karto haddii aad tagto magaalada, laga bilaabo Pompeii ilaa Villa del Este ama Herculaneum.
Booqo Magaalada Vatican-ka
Haddii aad booqanaysid Magaalada Vatican goor dhow, halkan waxaa ku yaal tilmaamo guud iyo, tan ugu muhiimsan, koodhkeeda dharka.
5 Booqasho oo u dhow Florence
Soo hel shan booqasho oo xiiso leh oo u dhow magaalada Florence, si aad ugu lumiso magaalooyinka yaryar ee Tuscany ama xeebta.
Toddobada meelood ee ugu quruxda badan Talyaaniga
Baro toddobada meelood ee ugu quruxda badan Talyaaniga, laga bilaabo magaalooyinka yar yar ee xeebta illaa magaalooyinka ugu muhiimsan ee ay ka buuxaan taalooyinku.
Agrigento (SICILY): safar ku aaddan Giriiggii hore
Haddii aad u safartid Sicily ma seegi kartid Agrigento, oo ah meel u gaar ah oo u eg Giriiggii hore oo leh taallooyin iyo matxafyo cajaa'ib leh.
Fasaxyo jaban oo Sardinia ah
Qor macluumaadkan iyo tilmaamaha si aad ugu raaxeysatid Sardinia oo boorsadaadu garabkaaga ku jirto.
Meelo jacayl ah oo lagu booqdo Talyaaniga
Baro meelo yar oo jaceyl ah oo ku yaal Talyaaniga, meelo caan ah iyo kuwo kale oo dejisanaa filimo jaceyl.
Sicily, maxaa la arkaa safarka jasiiradda
Sicily, jasiirad Talyaani ah oo ku taal badda Mediterranean-ka oo wax badan laga arko, laga bilaabo magaalooyinka xiisaha leh illaa muuqaalka dhuleed ee muuqaalka leh sida Etna.
Meelaha ugu wanaagsan Tuscany ee la booqdo
Gobolka Tuscany ee ku yaal Talyaaniga waa goob ay ka buuxaan taariikh, dhaqan iyo muuqaal qurxoon, marka waxaan arki doonaa magaalooyinka waaweyn.
Xeebta Amalfi waa meel caan ku ah dalxiis ee dalka Talyaaniga. Iyada oo leh tuulooyin qurux badan oo indha indheeya badda laga soo bilaabo qulqulka iyo meelaha la ogaado.
5 Xeebaha Sardinia inay ku raaxeystaan ​​fasaxa
Waxaan ka helnay shan xeebood oo cajiib ah Sardinia oo ah aagag run ah oo ku yaal badda dhexe si ay ugu raaxaystaan ​​ciidaha.
Waxyaabaha lagu arko Milan
Magaalada Milan waxay leedahay taallooyin qurux badan iyo meelo badan oo la booqdo, sidaas darteed waxay kaloo noqon kartaa meel dalxiis oo wanaagsan.
Corleone ee Sicily, oo ah sariirtii maafiyada ee rabtay inay joojiso inay mid noqoto
Soo hel Corleone, oo ah magaalo yar oo ku taal Sicily oo waligeed lala xiriiriyo maafiyada Talyaaniga. Ma runbaa waxa shineemo iyo suugaan sheegaa?
Florence, waa magaalo ay ka buuxdo farshaxan
Florence waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Talyaaniga, meel farshaxan iyo taariikh ku leh jidadkeeda. Soo ogow booqashooyinka lagama maarmaanka ah ee ay tahay inaad aragto.
Dib-u-dhalashada burburka Pompeii
Tan iyo burburkeedii AD 79, Pompeii wuxuu soo jiitay adduunka oo dhan. Sannad kasta malaayiin dalxiisayaal ah ayaa yimaada Talyaaniga si ay u soo arkaan.
Taariikhda iyo Astaamaha Roman Colosseum
Waxaan dhammaantiin kuu sheegaynaa wax ku saabsan Colosseum-ka Rome, sidoo kale loo yaqaan Flavian Amphitheater. Ha moogaanin faahfaahinta waajibka ah in lagu arko Talyaaniga
Strada della Forra, wadada qurxoon ee harada Garda
Xeebta Rimini, oo ah dhul bacaad leh oo baashaal ah
Xeebta Rimini waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan xagaaga ee ku yaal Talyaaniga. Waa xeeb xiiso badan.
Il Porcellino, oo ah xayawaanka nasiib u yeeshay Florence
Astaanta Florence ee nasiibka waa taalo yar oo naxaas ah oo loo yaqaan Il Porcellino
Xeebta Tropea ee Talyaaniga
Xeebta Tropea waxay ku taal Xeebta Calabrian, ee dalka Talyaaniga, waana meel qurux badan.
Costa Smeralda, aagga xulashada ee dalxiiska raaxada ee Sardinia
Xeebta Emerald waxaa lagu magacaabaa xeebta xeebta ee gobolka Sardiniya ee Gallura, oo ku taal gobolka Olbia-Tempio.
Puglia, oo ah ciribta kabaha Talyaaniga
Xuquuqda cidhibta kabahaas khiyaaliga ah ee weyn ee tilmaamaya juqraafiga Talyaaniga waa mid ka mid ah gobollada ugu quruxda badan uguna yar ee la yaqaan: La Puglia. Halkaan waxaan ka heli doonnaa xeebo waaweyn oo kali kali ah, tuulooyinkii qarniyadii dhexe oo lagu rinjiyeeyay caddaan iyo dhaqammo sidii ay layaab u ahaayeen
Astaamaha lama huraanka ah ee Rome qadiimiga ah
Maanta waxaan ka hadleynaa qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee Boqortooyadii Roomaanka
Xeebta cajiibka ah ee Scala dei Turchi ee Sicily
Scala dei Turchi, "jaranjarada Turkiga". Taasi waa magaca waxa dad badani u yihiin xeebta ugu quruxda badan Sicily. Magaca sifiican ayaa loo sharaxay markaan booqanayno: dhagaxyada waxay umuuqdaan kuwa jaranjarada jiidaya taasna waxay ahayd adeegsiga ay siinayeen burcad badeedda Turkiga ee bililiqeystay xeebaha jasiiradda qarnigii XNUMXaad.
Giant ee Monterosso
Sanadkii 1910, taallo weyn ayaa laga dhisay meel ku taal xeebta Liguria ee Talyaaniga, una dhow magaalada Monterosso. Waxay ahayd sawir-dhererkiisu yahay 14-mitir oo ah ilaaha Neptune qaabka caadiga ah ee ahaa in lagu qurxiyo aragtida Villa Pastine. Nabaad guurka badda iyo bambooyinkii xulufada la ahaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka ayaa si weyn u waxyeeleeyay Gawaarida 'Monterosso Giant', in kasta oo wax waliba ay weli yihiin mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan gobolkan.
Codsiyada ugu sareeya ee safarka Rome
Markan waxaan kuu soo bandhigi doonaa codsiyada ugu fiican ee aad ugu safreyso Rome. Aynu bilowno adoo sheegaya Katie Parla's ...
Palmanova, waa magaalo Talyaani ah oo xiddig leh
Renaissance sidoo kale waxay keeneen kacaan ku saabsan aagga qorshaynta magaalooyinka ee Talyaaniga. Halkaas ayaa lagu alifay nidaamyada cusub ee lagu xoojinayo magaalooyinka ee ka jawaabaya horumarka militariga ee waqtigaas, sidaa darteedna ka duwan kuwii xilliyadii dhexe. Sidaas ayey ku dhasheen darbiyada qaabeeya xiddigo leh saldhigyo iyo xaglo xiran sida kuwa magaalada Palmanova, oo u dhow Venice.
Tuscany (Talyaani): waa gobol leh taariikh iyo dabeecad aan la barbar dhigi karin
Tuscany waxay mudnaan gaar ah u leedahay magaalooyin iyo magaalooyin fara badan oo leh qurux dabiici ah iyo hidaha taariikhiga iyo dhaqanka.
Bakayle (Talyaani): soo hel janno ku dhow Sicily
Jasiiradda Lampedusa waxay ku taal Badda Dhexe, iyada oo ah cirifka waqooyi ee Yurub, maadaama ay u jirto oo keliya 167 km. ka baxsan xeebaha Tunisia.
Liistada ku qor shanta xeebood ee ugu fiican ee loo yaqaan 'nudist' ee Talyaaniga
Habeenkii Guduudnaa ee Rimini
Luulyo kasta magaalada Rimini iyo dhammaan xeebta Adriatic ee gobolka Romagna ee Talyaaniga waxaa ku soo duulay midab: casaan, oo iftiimiya dhismayaasha habeenkii, wasakheeya jidadka iyo taallooyinka isla markaana si dhuumaaleysi ah nolosha ku gala. kun siyaabood. Waa Notte Rosa (Habeenkii Casaanka), mid ka mid ah dhacdooyinkii weynaa ee xagaagii Talyaaniga.
Baxnaan jacayl ah Kirismaskan
Ma ku fikireysaa inaad ku raaxeysatid baxsad jacayl ah? Hadday sidaas tahay, waxaan kuu hayaa war aad u wanaagsan, maxaa yeelay dalabyadan ...
Qalcado ku yaal Tuscany, Italy
Waxaan u safreynaa gobolka Talyaaniga ee Tuscany si aan u aragno qalcadaha ugu quruxda badan ee aan ku dhex arki karno
Qubeyska kuleylka ee Tuscany
Waxaan u safreynaa Tuscany, oo ku taal Talyaaniga, si aan u aragno qaar ka mid ah qubeysyadeeda kuleylka ah, ee ku habboon dalxiiska nasashada
Caadooyinka bulshada Talyaaniga
Mid ka mid ah dhinacyada ugu caansan ee Talyaanigu waa dabeecadooda, waa dad jecel oo aad u muujiya. Waa dad…
Milan, caasimada moodada (Ia)
Waxaan sii wadaynaa safarradeena waxaanan sii joogi doonnaa Yurub, markan waxaan la kulmi doonnaa mid ka mid ah ...
Fagaarayaasha, jidadka iyo meelaha caadiga ah ee Naples ee Talyaaniga
sawir sumadeed: seleniamorgillo Wadooyinka waaweyn ee ku yaal bartamaha Naples waxaa ka mid ah Via Toledo, oo dhowr sano ka hor la yiraahdo…
Kaniisadda oo lagu xusaayey tiradii ugu horreysay ee katooliga
Caqiidada caanka ah ayaa leh in tiradii ugu horreysay ee Katooliga lagu xuso Santa Maria oo ku taal Trastevere, Rome. Kaniisadan ...
Goobaha ugu fiican jalaatada Rome
Maalin dhaweyd waxaan ka faaloonayay sida uu qabo Faransiisku, qolka jalaatada ee Berthillon ee Paris wuxuu sameeyaa jalaatada adduunka ugu fiican. Laakiin…
iAudioGuide waxay bixisaa hagayaal maqal oo bilaash ah magaalooyinka waaweyn ee Yurub
Ma ka daashay inaad marwalba ku sidato hagahaaga shaqada? IAudioguide waxaad ku dhagaysan kartaa hagahaaga codka inta aad guureyso ...